Maalinta: Sebtember 7, 2019
Waa kuwee Wadooyinka Moolka iyo Basaska ee Istanbul 24 Saat? ..
24 saac ee gaadiidka dadweynaha, oo ah mid ka mid ah howlihii uu ballanqaaday madaxweynaha İBB Ekrem İmamoğlu muddadii doorashada, ayaa bilaabmay. Iyada oo ay ugu wacan tahay daraasadaha lagu sameeyay iyada oo lagu ogaanayo khadadka mashquulka badan ee Istanbul, metro iyo bas [More ...]
Shaqooyinka loo yaqaan 'Asphalt' waxaa bilawday Maamulka Gobollada Gaarka ah ee Karabük ee kusocda Xarunta Keltepe Ski Center. Xoghayaha Guud ee Maamulka Gobolka Karabük Mehmet Long, shaqo dhir kulul ayaa bilaabay inuu daraasad ku sameeyo rafanka. Keltepe [More ...]
Khariidadda Joogtada ee Bursa T2 Tram Line iyo Video-ga xayeysiinta: Shaqooyinka dhismaha waxay kusii socdaan khadka Bursa T2 Tram. Halkan waxaa ah joogsiga loogu talo galay Bursa T2 tram line TX T2 Terminal Magaalada, kaasoo laga bilaabay Bursa [More ...]
Agaasinka Guud ee Maamulka Duulista Hawada (DHMI), 2019 bishii Agoosto ee sanadka iyo bisha 8 ee sanadka, ayaa la shaaciyay tirakoobka diyaaradaha, rakaabka iyo tirakoobka xamuulka. Xogta Duulista "qeybaha keentay" waa sida dalka Turkiga [More ...]
Tababarrada ayaa ka Bilaabmay Wershadda Model Bursa
Rugta Ganacsiga iyo Warshadaha ee Bursa (BTSO) oo la aasaasay iyada oo la adeegsanayo habab wax soo saar si loo kordhiyo wax soosaarka iyo tayada tababbarka Wershadaha Bursa Model ee ganacsiyada ayaa bilaabmay. Waxaa qoray BTSO, Wasaaradda Warshadaha iyo Tiknolojiyadda [More ...]
Kahramanmaraş Dawlada Hoose ee Magaalooyinka, 9 waxay bilaabmi doontaa Isniinta bisha Sebtember, iyada oo la fiirinayo mudada waxbarasho ee cusub ee gaadiidka dadweynaha ee magaalada ayaa sameeyay qorshe cusub. Basaska dadweynaha oo dhami waxay ku jiri doonaan garoonka, duulimaadyo dheeri ah ayaa la sameyn doonaa. [More ...]
Duqa Magaalada Caasimadda ah ee Ordu Mehmet Hilmi Güler wuxuu sii wadaa shaqadiisa si uu u sameeyo howlaha badaha si ay noloshu ugu noolaato isagoo Ordin kula heshiinaya bada. Duqa magaalada Güler ayaa sheegay in ay dalxiis balaaran u siin doonaan Ordu xaaladdan, [More ...]
Magacyo Cusub oo Loogu Talagalay Magaalada Caasimada
Dowladda Hoose ee Magaalada Ankara waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso wadooyinka cusub, rafiiqa, marinada isgoysyada iyo isgoysyada dhamaan caasimada si loogu kala gooyo gaadiid aan kala go 'lahayn oo amaan ah. Yaraynta taraafikada meelaha muhiimka ah ee caasimada [More ...]
Xilliga Tababarka Diyaarinta Gaadiidka Dadweynaha ee Sakarya
Waaxda Gaadiidka Dawladaha Hoose ee 9 ayaa shaacisay qabanqaabada lagu sameynayo gaadiidka dadweynaha kahor xilliga waxbarashada cusub oo bilaabmi doonta Isniinta. Baaxaddaas dhexdeeda, degmadii bilaabay bilaabashada wakhtiga qaboobaha [More ...]
Muddada Xilliga Jiilaalka Ayaa Ka Bilaabeysa Gaadiidka Dadweynaha ee Kocaeli
Mid ka mid ah laxiriira Degmooyinka Magaalada Kocaeli, GaadiidkaPark A.Ş. Basaska iyo taraamyada ay maamusho 9 Sebtember 2019 waxay bilaabataa Isniinta. TransportationPark ayaa war qoraal ah ku sheegtay; xooga lagu arki karo furitaanka iskuulada [More ...]
Khadka 800CK wuu dhacayaa
Gaadiidka Dowlada Hoose ee KocaeliPark A.Ş. 800C, 800K 8 wuxuu dhammaadaa Sebtember. Toddobaadka fasaxa ee 800K, lambarka xariiqda xariiqda ee 800C iyo koodh 800CK maalmaha shaqada ee loogu talagalay muwaaddiniinta inay marin u helaan xeebaha calanka buluugga ah [More ...]